Archive du 20161220
Anth�lme Ramparany Nisy nanapoizina tamin�ny zava-pisotro
Nanaitra ny sain�ny maro ny vaovao nivoaka omaly fa nisy nanapoizina tamin�ny alalan�ny zava-pisotro i Anth�lme Ramparany, depiote ao anatin�ny antoko HVM
Augustin Andrimananoro Havotsotra sa hadoboka ?
Anio talata 20 desambra amin�ny 8 ora sy sasany maraina no fotoana voatondro hitsarana an�ingahy Augustin Andriamananoro, izay nosamborina teny am-pandevenana ny sabotsy 10 desambra lasa teo.
Kajikajy maloton�ny 2018 Efa mipetrapetraka ny an�ny HVM
Raikitra ny kajikajy politikan�ny HVM hanomanana ny fifidianana amin�ny 2018.
Rajaonarimampianina Nanome galona ireo mpiaro azy
Niraradraraka ny fizarana kintana ho an�ireo manamboninahitra ao amin�ny foloalindahy omaly alatsinainy 19 desambra 2016 nandritra ny filankevitry ny minisitra notanterahana teny Iavoloha. 62 no lasa manamboninahitra jeneraly ka ny 17 kolonely nasondrotra ho general de brigade, nahazo ny galona general de division kosa ny 45.
Propagandy mialoha ny fotoana Manaitra ny CENI ny KMF/CNOE
Mbola lesoka ho an�ny tany an-dalam-pandrosoana toa antsika, raha araka ny fanazavan-dRaharisoamalala Patricia mpikambana eo anivon�ny KMF /CNOE omaly ny tsy fanajana ny lal�na velona mahakasika ny fifidianana.
Taratasin�i Jean Mampirediredy
Miarahaba Jean a ! Miaiky anareo aho aloha amin�ilay fisamborana etsy sy eroa e ! Mino aho fa tompondaka mihitsy ianareo amin�iny.
Foloalindahy Voailikilika ireo zokiolona mpisotro ronono
Nisy ny fanitsiana tabilao mari-karama na �alignement du grille indiciaire� ho an�ny fianakaviamben�ny foloalindahy ny taona 2005.
Fanafoanana ny halatra omby Vita amin�ity taona ity, hoy ny profesora Tsiavaliky C�lestin
Manana antoko politika 371, antokom-pinoana 230 any ho any, fiarahamonim-pirenena tsy tambo isaina, mpitandro filaminana marobe sy tantsaha mpamboly sy mpiompy ary mpanabe tsy voaisa isika,
Fiaraha-miasa amin�ny orinasa vahiny vaventy Vahaolana amin�ny fahatapahan-jiro, hoy i Faly Ramakavelo
Mila antsoina ireo orinasa vahiny vaventy avy any ivelany mba hamokatra herinaratra eto ao anatin�ny fotoana voafetra, izany hoe 15 taona farafahakeliny, hoy ny mpahay toekarena Faly Ramakavelo, raha hitady vahaolana amin�io resaka fahatapahan-jiro lavareny io.
Hifarana ny taona 2016 Maro ireo kaominina tsy nahazo �subvention�
Manindraindra ny fanatanterahana ny fanapariaham-pahefana ny fitondrana nefa tsy mitana ny teniny.
Fanomezana faran�ny taonan�ny Airtel 8 no nitsikian�ny vintana
Olona valo indray nanomboka ny 15 desambra lasa teo no nahazo ny anjara lokany avy amin�ny Airtel ho an�ilay hetsika tanteraho ny nofinofinao andiany fahefatra tetsy Ambohijatovo.
Mpahay informatika sy zaitra Miisa 177 mianadahy hiditra amin�ny tsenan�ny asa
Tontosa ny sabotsy 17 desambra tao amin�ny trano fanaovam-petin�ny Madvision Andohanatady-Fianarantsoa ny famoahana mpiofana miisa 177 andiany faha-45 � FIVOY � nahavita ny fiofanana momba ny informatika sy zaitra.
Hifamela sa hifandako ?
Ao anatin�ny vanim-potoanan�ny fety tanteraka isika izao. Mitaky fitoniana politika izany ary ilaina ny hanadinoana ny romoromo.